Wararka Maanta: Axad, July 8 , 2012-Guddiga Ammaanka Qaranka oo sheegay in waddooyin ka tirsan Muqdisho loo xirayo Ansixinta Dastuurka Cusub
Warsaxaafadeed laga soo saaray kulan ay guddiga amaanka Qaranka ku yeesheen magaalada Muqdisho maanta oo Axad ah, iyadoo la sheegay in muddadaas ay uu ka socon doono dugsiga tababarka booliiska ee Scola Pulisio kulan lagu ansixnayo qabyo-qoraalka dastuurka.
"Laga billaabo 10-ka bishaan waxaa xirmi doona wadooyinka dhowr ah oo taga Iskoolka booliiska, kuwaasoo aan loo ogolaan doonin inay gaadiidku maraan, sidoo klae waxaa xirmaya jidka Maka Al-Mukarama oo loo ogolaan doono in dadka keliya ay maraan," ayuu yiri agaasimaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka ee DKMG ah, Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) oo saxaafada u akhiriyay warkan.
Agaasimuhu wuxuu sheegay in sababta ay u soo hormariyeen warkan uu yahay si aysan shacabku ugu qaldamin, wuxuuna xusay in wadooyinkaas la dhigi doono ciidammo fara badan oo loogu talogalay inay ammaanka sugaan dadka qaldamana u sheegaan in jidku xiran yahay.
Tallaabadan ayay dowladda KMG ah ku sheegay inay tahay mid lagu adkenayo ammaanka goobta uu shirku ka socdo, iyadoo lagu wado in muddadaas lagu ansixiyo dastuurka cusub oo ay dowladu dhawaan u gudbisay odayaasha dhaqanka.
Sidoo kale, waxaa lagu wadaa in bishan dhamaadkeeda lasoo xulo xidhibaanada cusub ee bedeli doona kuwa hadda shaqeynaya, waxaana lagu sheegay qorshahan inuu yahay mid ay Soomaaliga kaga gudbayso xiliga KMG ah ee ay muddada dheer kusoo jirtay.